Holland Oo Ceeb Iyo Isqabqabsi Uga Dareeray Yurub Iyo Xidigihii Dalkaas Oo Mid Waliba Naftiisa Iyo Calooshiisa Ku Ekaaday
Xidigihii foolxumada looga diray ciyaaraha Yurub ee Holland ayaa laga soo sheegayaa inay is qabqabsi iyo isla weyni uga hareen ciyaarahan loo saadaalinayay inay kamid noqon doonaan kuwa looga cabsanayo, balse dhibic la,aan dharkooda loo geliyay.
Ragga sida weyn farta loogu fiiqay ayaa waxaa kamid ah kuwa ugu caansan dalkaan sida Robben, Sneijder, Van Persie iyo Van der Vaart oo mid weliba gafuur tuur iyo kibir kan kale u qabay saameyn weyn ku yeelatay hab ciyaareedkii xulka oo madaxda ka yahay Bert Van Marwijk.
Xidigahan ayaa la sheegay inay awood weyn ku lahaadeen habka ay kooxdu u ciyaareyso iyo qaabka ay u ciyaareyso intaba, waxaana qaarkood warbaahinta ka sheegeen heerka uu gaarsiisanyahay muranka balse mid kasta uu farta ku fiiqayo kan kale, iyo in macalinkan lagu eedeeyay naas nuujin uu ku hayay kabtan Van Bommel oo gabdhiisa qaba sida uu garoonka ugu hayay kabtana uga dhigay oo raga qaarkii ka gadoodsanaayeen.
Xulka Holland oo haystay labada xidig ee ku kala guuleystay gool dhalinta horyaalada Ingiriiska iyo jarmalka Van Persie iyo Huntalaar ayaa dhaliyay 2 gool kaliya 3dii kulan oo ay ciyaareen, waxaana si weyn taageerayaashoodu uga niyad jabeen Van Persie oo ay ka muuqatay dabacsanaan aad u weyn.
Sidoo kale Robben ayaa lagu eedeeyay inuu ahaa nin kaligiis iska ciyaaraya markuu doono dhiiba kubada, markuu doonana goolku ku darbeeya dhankey doonto ha martee kubada, sidoo kale Sneijder oo sanadkan aad u liitay xilli ciyaareedkiisii Inter ayaa laga dareemayay jahawareer aad u weyn, waxaase ugu darnaa Van der Vaart oo warbaahinta ka dhaleeceeyay hab ciyaareedka kooxda isla markaana isku haysta inuu yahay kabtanka runta ah ee kooxda Holland.
Isku soo wada duub Holland si rasmi ah oo ay u qalmeen ayaa looga reebay ciyaaraha ama ha murmaan ama ha ciyaaraan, waxaana qeybtooda si xaraga leh uga soo baxay mashiinadii Jarmalka oo uu hor kacayo Ozil iyo farsamayqaanadii Portugal oo uu hogaaminayay Ronaldo.
�	Latest News